🥇 aza ajụjụ maka nnụnụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 599
Video nke aza ajụjụ maka nnụnụ
Antụ ajụjụ maka nnụnụ
Ugbo ulo obula nke oge a aghaghi agha agha inwe akwukwo banyere umu nnunu ya, nke, nke mbu, na emetuta ego, n’ihi na n’uzo a o gha adi nfe karie iru nkpebi banyere uru nke ulo oru n’ozuzu. Enwere ike ịhazi ọnụ ọgụgụ nnụnụ n'ọtụtụ ụzọ, ụlọ ọrụ dị iche iche ka na-eji akwụkwọ akụkọ ederede dị ka ihe ndabere maka ịgbakọ ego, nke ndị ọrụ ugbo nnụnụ na-eji aka ha edebanye ozi niile dị mkpa ma debe tebụl pụrụ iche. Agbanyeghị, enwere ike ịhọrọ ụzọ ọzọ nke ịhazi njikwa, n'ime ọrụ mmadụ ha ga-edochi ngwanrọ maka akpaaka. Ọ na-enye gị ohere ịme otu ọrụ ahụ kwa ụbọchị ọtụtụ oge ngwa ngwa ma ka mma.
Iji malite, ịkwụ ụgwọ nnụnụ na-egosi njikwa nke ọtụtụ arụmọrụ mmepụta, nke a ga-edekọ n'oge, na ozi a natara ga-edozi ngwa ngwa. Onye na-adabere mgbe niile na ọnọdụ ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ, dị ka ibu ọrụ, enweghị ike ịnye ezigbo njikwa akaụntụ. N'ihi ndabere ya, ozi ahụ abanye na mpempe akwụkwọ maka ịza ajụjụ maka nnụnụ nwere ike gbagọọ agbagọ, banye n'oge, ma ọ bụ onye ọrụ ahụ nwere ike ịdọpụ uche ya kpamkpam wee banye data dị mkpa. Site n'iji ngwa kọmputa, ị na-ebelata ihe egwu ndị a niile, ebe ọ bụ na ọgụgụ isi nke ngwanrọ ahụ na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị na njehie, n'agbanyeghị ihe ndị edepụtara n'elu.
Site na usoro azụmahịa a, enyere gị aka idobe nnụnnụ dị ọcha na nke nghọta, idebe ha, nri, na mmepụta ya. Okwesiri ighota na iji komputa eme ihe maka oru nke ihe umu nnunu na enyere aka nyefe ihe omuma n'ime ugbo elu dijitalụ, nke putara n'ihi akụrụngwa kọmputa nke ebe ọrụ, nke a na-apụghị izere ezere n'oge akpaaka. Na mgbakwunye na kọmputa, ndị ọrụ nke ugbo nnụnụ ahụ ga-enwe ike iji ngwaọrụ nke ọdịdị dị iche na-arụkọ ọrụ na ngwanrọ na mmepụta. Maka ihe ka ukwuu n'ime ụlọ ọrụ ahụ, a na-eji ha maka ịchịkwa ụlọ nkwakọba ihe ebe nnụnụ na-eri nri ma a na-echekwa ngwaahịa nnụnụ. Mmezu nke usoro dijitalụ nwere uru ya, n'elu nyocha zuru ezu nke ọ bịara doo anya na ụzọ dị otú a maka njikwa bụ naanị otu ziri ezi. Enwere ike ịchekwa data dijitalụ na nchekwa data nke ntinye usoro maka ogologo oge ka ị na-adị mfe ịnweta maka ndị ọrụ, yabụ na ọnọdụ nke ọnọdụ ọ bụla enwere ike ịgbagha, ị nwere ike iji ihe akaebe zuru oke dozie ya. Tụkwasị na nke ahụ, ịchekwa ozi na ngwa akpaaka maka nyocha nnụnụ na-enye ha ohere iji hụ na nchekwa na nzuzo, n'ihi na ọ bụghị naanị na ọtụtụ sọftụwia ọgbara ọhụrụ nwere sistemụ nchedo ọtụtụ, mana ị nwekwara ike hazie ịnweta ha maka onye ọrụ ọ bụla iche. Ọ bụrụ na ị kpebirila ibufe azụmahịa gị na njikwa akpaaka, mgbe ahụ nzọụkwụ ọzọ maka ị ga-abụ nhọrọ nke ngwanrọ kachasị mma, nke e nwere ọtụtụ n'oge ahụ.
Otu ezigbo ngwa kọmputa eji arụ ọrụ maka ụdị ọrụ ọ bụla bụ ngwaahịa pụrụ iche sitere na ndị mmepe ama ama nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ, ụlọ ọrụ mmepe Software USU. A na-akpọ ya USU Software ma dịrị na ahịa teknụzụ ihe karịrị afọ 8. Ngwa a dị mma maka ngụta nnụnụ na ịchịkwa akụkụ ndị ọzọ nke imepụta ihe n'ugbo nnụnnụ. Site n'enyemaka ya, ị nwere ike ijikwa ndị ọrụ, njikwa na ngụkọta oge nke ụgwọ ọrụ, mmegharị ego, usoro nchekwa na usoro nchekwa nke nri, yana ngwaahịa dị iche iche, mepee ụzọ CRM, na ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, nhazi nke USU Software maka nnụnụ nnụnụ abụghị naanị atụmatụ ya, n'ihi na ndị nrụpụta na-anọchite anya usoro nhazi usoro iri abụọ nke ha, mepụtara maka njikwa akpaaka nke ngalaba azụmahịa dị iche iche. Ndi komputa enyere ikikere nke komputa di mfe iji tinye. Enwere ike ime ya mgbe ị nọ ọdụ n'ọfịs, na-enweghị mkpa ịga ebe ọ bụla, n'ihi na ndị mmemme anyị na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike hazie ngwanrọ ahụ ọbụna n'ebe dị anya, nke ị ga-achọ ịnye kọmputa gị ma nye njikọ Internetntanetị. Nke a na-enye ndị ọkachamara USU Software nnukwu uru n'ihi na n'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịkwado ụlọ ọrụ dị iche iche gburugburu ụwa na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla. Nhazi a na-enweta nke interface ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịmalite ịrụ ọrụ n'ime ya na-enweghị nkwadebe ma ọ bụ ọzụzụ ọ bụla, yabụ onye ọrụ nwere asambodo ọ bụla nwere ike iji USU Software. N’ụzọ dị ịtụnanya, ọbụlagodi menu nke mmemme a nwere naanị ngalaba atọ, dịka ‘Akụkọ’, ‘Module na Referens. N'ime nke ọ bụla n'ime ha, ewepụtala ọtụtụ ngalaba ndị ọzọ na-enyere aka ịme ihe omume na nkọwapụta. A na-edekọ ọrụ niile na-aga n'ihu dị mkpa maka mmezu nke nnụnụ na-edekọ na ngalaba nke Modulu, ebe enwere njikwa maka aha ọ bụla ma ọ bụ isiokwu ọ bụla n'ụdị nke ịmepụta ihe ndekọ kọmputa pụrụ iche ma ọ bụ tebụl. Site na aka ya, akuku a nwere ike gosiputa dika akwukwo nke otutu ihe eji eme udiri maka nnụnnụ na-aza ajụjụ, a na-agbanwe akụkụ ya maka mkpa onye ọrụ ọ bụla. Ha nwere ike tinye ozi ọ bụla na arụmọrụ mmepụta niile na-aga n'ihu, na-agbaso ọnọdụ nke ihe ndị dị ugbu a. Ka e wee debe ndekọ ego ahụ na akpaghị aka, tupu ịmalite ọrụ na USU Software, ọ dị mkpa itinye oge iji mejupụta ngalaba 'Ntugharị', nke bụ isi mebere usoro aha aha nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya. Ebe inwere ike igbakwunye ndebiri ndi mepere emepe maka akwukwo n’ime gi; ndepụta nke ndị ọrụ, nnụnụ, nri, ọgwụ; ndị ọrụ ịgbanwe oge ọrụ; usoro nri ụmụ nnụnụ na ọrụ anụmanụ dị iche iche, wdg.
N'otu aka ahụ, ihe dị mkpa na ntinye ngwanrọ maka nnụnụ na-aza ajụjụ bụ ngalaba Modulu, bụ nke na-ahụ maka ọrụ nyocha na arụmọrụ. N'ihi ọrụ ya, ị nwere ike ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma, na nke kachasị mkpa, nyochaa n'ụzọ zuru ezu akụkụ ọ bụla ị nwere mmasị na ya, chịkọta ọnụ ọgụgụ dabere na nyocha ma gosipụta ya maka ihe doro anya na ụdị ịchọrọ, dịka mpempe akwụkwọ, eserese, eserese, eserese. . Nakwa na ngọngọ a, ọ ga - ekwe omume ịmepụta ma dozie nkwupụta ego na ndekọ ego, na - arụ ọrụ dị mkpa na ịza ajụjụ. Ọ bụghị naanị na mmemme ahụ nwere ike ịnakọta ya n'onwe ya, mana a ga-ezitere gị site na e-mail n'oge kwesịrị ekwesị. Site na ọtụtụ ngwaọrụ bara uru na ngwa agha ya, USU Software kwesịrị ịbụ onye enyemaka dị oke mkpa maka onye njikwa ọ bụla ma ọ bụ onye nwe ya.
Na mmechi, achọrọ m ikwu na ngwa anyị na-akpaghị aka maka nnụnụ na-aza ajụjụ abụghị naanị nwere arụmọrụ buru ibu yana nhazi dị mfe kamakwa ọnụ ahịa onye kwuo uche ya maka mmejuputa; usoro mmezi nke ndị mmepe USU apụtaghị iji ụgwọ ndenye aha, ya mere, iji ngwanrọ na oge niile bụ n'efu.
Na USU Software, a na-arụ ọrụ na nnụnụ na ịdebe ha mgbe niile, ebe ị nwere ike ịlele arụmọrụ gosipụtara ụbọchị maka nchekwa data ya. Mgbe ị na-arụ ọrụ na tebụl, ị nwere ike ịhazi oke ha n'ụzọ nke aka gị, site n'ịgbanwe ọnụọgụ nke ahịrị na sel, hichapụ ma ọ bụ gbanwee ha, dozie ọdịnaya ọdịnaya na ogidi na-arịgo ma ọ bụ na-agbadata n'usoro. Ekele maka ihe ndekọ ego na-akpaghị aka, ekwere gị nkwa ịkwadebe ma nyefee ha n'oge na enweghị njehie. Na mpempe akwụkwọ na-aza ajụjụ, mgbe ị na-ejuputa ha, ọ ga-ekwe omume iji asụsụ ọ bụla dị maka nghọta gị, mgbe ị na-azụta ụdị kọmputa nke mba ofesi. Maka mma nke ndepụta ego maka ọdịnaya ha na ngwa ahụ, ị nwere ike ịmepụta ụlọ nkwakọba ihe ọ bụla.
Nchịkwa azụmahịa nke kọmputa na USU Software na-enye gị ohere ịnata ozi kachasị zie ezi, nke a pụrụ ịtụkwasị obi, na nke emelitere maka ịza ajụjụ oge niile. Ọ ga-adị mfe karị ịchịkwa ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ maka nnụnụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ ahụ glider wuru n'ime ngwa ahụ. A na-agbakọ ụgwọ nke ngwaahịa ndị a mepụtara n'ugbo nnụnnụ site na mmemme ahụ na akpaghị aka, dabere na data ọnụ ahịa dịnụ, nke dị mma maka ịza ajụjụ. Na mpempe akwụkwọ, usoro a nwere ike ịnwe ọ bụghị naanị ozi gbasara nnụnụ, ụmụ ha na ngwaahịa, kamakwa ndị isi ụlọ ọrụ. Site na ịmepụta nchekwa data nke ndị ahịa, sọftụwia ahụ na - ewepụta kaadi nkeonwe maka nke ọ bụla, ebe ọ na - abanye ozi niile dị na onye a. You nwere ike ịmepụta ndebiri ị ga-eji mepụta akwụkwọ ahụ na nzukọ ahụ n'onwe gị ma ọ bụ were nlele nke steeti setịpụrụ.
Ntọala nke tebụl na 'Modul' nwere ike gbanwee naanị ndị ọrụ ahụ natara ikike yiri ya na nnweta site na njikwa. Njikwa nke ugbo nnụnụ nwere ike ịhazi nnweta faịlụ nzuzo nke nchekwa data kọmputa, dabere na ikike nke otu onye ọrụ. Workingrụ ọrụ na sọftụwia USU dị mma maka ọrụ nkwonkwo nke ọtụtụ ngalaba ejikọtara na netwọkụ mpaghara ma ọ bụ Ntanetị. Ekele maka atụmatụ nke ịkwado data nyocha, gụnyere akwụkwọ mgbasa ozi nchịkwa nnụnnụ, mmemme anyị na-enye gị ohere ịchekwa ozi ahụ ogologo oge.